कस्तो हुनुपर्छ कोरोनापारिको सिने तयारी ?
दीपेन्द्र के खनाल, फिल्म निर्देशक
२०७७ बैशाख १६ मंगलबार ०८:२३:००
मानव सभयताले सामना गरेको यो नयाँ संकट होइन । कोभिड–१९ जस्ता अनेकन महामारीको सामना गरेर संसार यहाँसम्म आइपुगेको छ । कोभिड–१९ लाई चिरेर मानव सभ्यता अझैं अगाडि जाने नै छ । तर, केही मानक र भाष्यहरु कोभिड–१९ सँगै सकिनेछन् । नयाँ भाष्य र मानकको खोजी अब आउने समयले गर्ने नै छ ।
महिना दिन कटिसक्यो मानिसहरु लकडाउनमा बसेको । यसबीचमा कतिले घरबाटै काम गरे, सिनेमा हेरे, पुस्तक पढे या अरु केही सृजनात्मक काम गरे । सामाजिक संजाल हेर्दा थाहा हुन्छ, मानिसले सबैभन्दा ज्यादा त सिनेमा नै हेरे । सिनेमाको विभिन्न ग्रुपदेखि स्टाटस, ट्वीटहरुमा राम्रो सिनेमा रिकोमेन्ड गर्ने र गरिमाग्नेहरु टन्नै छन् । तर, नेपाली सिनेमाबारे न छलफल भएको देखिन्छ, न कसैले नेपाली सिनेमा रिकोमेन्ड नै गर्छन् ।
आधा शताब्दीको गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाली सिने उद्योगमा हेर्नका लागि एउटा पनि राम्रा सिनेमा छैनन् त ? निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको मनमा पनि यो प्रश्न उभिन्छ । उत्तर पाउँछन् पनि, ‘अवश्य छ, तर औंलामा गन्नुपर्छ ।’ वर्षमा सय हाराहारीमा बन्ने सिनेमा उद्योगमा राम्रो सिनेमा औंलामा गन्नुपर्ने ? खनालको उत्तर छ, ‘राम्रो मेकर हुन परेन त !’
अहिले भने खनाल गमी बस्छन्, ‘अब मेकर गम्भीर नभइ त धरै छैन ।’ सिनेमै नहेर्ने मानिसहरु पनि दिनको एक दुई सिनेमा हेरिरहेका छन् । त्यो पनि विदेशी आर्ट–सिनेमा । नेपाली सिनेमाको नामै लिँदैनन् । जो दर्शक नेपाली सिनेमा हेर्न हलसम्म जाँदैनन्, उनीहरुमा सिनेमा हेर्ने आदत लागेको छ । तर, राम्रो सिनेमा । निर्देशक खनाल अनुमान गर्छन्, सिनेमा साक्षरता बढिरहेको छ । ‘यो हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो,’ खनाल भन्छन्, ‘अब पनि हामी गम्भीर भएर राम्रो सिनेमा नबनाउने हो भने दर्शकले फर्केर पनि हेर्दैनन् । मेकरहरु यसबारे सचेत नभइ हुन्न ।’
‘अबको यात्रा नयाँ शिराबाट सिनेमा बनाउने मार्गमा हुनुपर्छ, जसले मेकिङ शैली, सिर्जनात्मकता र विषयवस्तुका हिसाबबाट अन्य उद्योगका सिनेमासँग भिड्न सकून् ।’
यो समयलाई खनाल अवसर मान्छन् । मेकरले ध्यान गर्नुपर्ने समय मान्छन् । मन्थन गर्नुपर्ने अवस्था मान्छन् । आफैंले हिँडिआएको बाटोबारे समीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको हो कि लाग्छ खनाललाई । ‘मजाले बसेर आफैंले बनाएको सिनेमा दर्शक भएर हेरौं न कति गल्ती छन् ,’ खनाल भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा ती गल्ती नदोहो¥याउने प्रण गर्नु नै अबको आउने दिनमा गतिलो सिनेमा नेपाली सिने उद्योगलाई दिनु हो ।’ राम्रा र सम्भावना बोकेका मेकरले यी विषय सोचिरहेका होलान् कि लाग्छ खनाललाई ।
अहिले हामीले भोगिरहेको अवस्था विकराल र दर्दनाक भए पनि अर्को वर्ष दुईचार राम्रो सिनेमा आउछ भन्नेबारे आशावादी छन् खनाल । अहिले कतिपय सिनेमा आधा सुट भएर रोकिएका छन् । कति सिनेमा डबिङमा त कति इडिटिङमा रोकिएका छन् । प्रदर्शन हुनका लागि तयार सिनेमा, प्रदर्शन मिति तोकेका सिनेमा अब कहिले प्रदर्शन हुने हुन्, अनिश्चित छ । प्रमोसनमा लागिरहेका कलाकार लकडाउनमा छन् । अनेक अवस्थामा रोकिएका सिनेमाले निर्मातालाई कत्रो मर्कामा पार्ला, त्यो अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । एउटा मेकरको हिसाबमा भने अब पुरानो ढर्राबाट नेपाली सिनेमालाई अगाडि बढाउनेबारे सोच्नु मूर्खता शिवाय केही नहुने खनालको अनुमान छ । खनाल भन्छन्, ‘किनभने नेपाली सिनेमामा ठूलो समस्या मेकरमै देखिएको छ । मेकर एकदम कमजोर छन् ।’
खनालको अनुभव छ, आफ्नो सिनेमा ‘आमा’ बढीजसो नयाँ दर्शकले हेरिदिए । नयाँ दर्शकबाट जुन प्रेम मिल्यो, त्यसले आफूलाई हौस्याएको पनि बताउँछन् खनाल । ‘आमा’ मा नयाँ दर्शकको उपस्थिति देखेपछि खनालको मनमा प्रश्न उब्जियो, ‘हामीले नयाँ दर्शक तान्ने प्रयास कहिले ग¥यौं त ? गरेकै रहेनछौं ।’ खनाल जोशिएर बोल्छन्, ‘तपाईंको सिनेमा हेर्न नयाँ दर्शक आउन सक्दैन भने अनुमान गर्नुस्, बजार बढिरहेको छ कि खुम्चिरहेको छ !’
मेकरलाई कसैले सिनेमा यसरी बनाऊ भनेर उसले बनाउने होइन । मेकरले यसरी बनाउँछु भनेर निर्मातादेखि कलाकारसम्मलाई कन्भिन्स गर्ने हो, खनालको बुझाइ हो यो । भन्छन्, ‘जंगलमा लगेर छाडिदिएपछि कसरी सिकार गर्छ सिकारी कुकुरको कला हो, मालिकको काम जंगलसम्म पु¥याउने मात्र हो, कुकुरसँगै पछि लाग्दा सिकार हात लाग्दैन ।’ खनाल केही मेकरप्रति आफू आशावादी रहेको र आउँदो वर्ष राम्रो सिनेमा आउनेमा पनि आशावादी छन् । भन्छन्, ‘राम्रो सिनेमा मैले नै या कोही अरुले मात्र बनाउने भन्ने होइन, जसले बनाउँछ, त्यो हाम्रो उद्योगलाई नै फाइदा हो । राम्र्रोलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्छ ।’
हल्ला र बजारलाई हेरेर सिनेमा बनाउनेहरुको अर्कै कुरा तर, विषयवस्तु, मौलिकतामाथि सिनेमा बजाउन खोजिरहेका मेकरहरुले चाहिँ अब सोच्नुपर्ने धारणा राख्छन् खनाल । ‘यो समय भने आफुले आफूलाई चिन्ने अवसर हो,’ खनाल भन्छन्, ‘अबको हाम्रो बाटो भनेको नयाँ शिराबाट अगाडि बढेर सिनेमा बनाउने हो । जुन सिनेमाहरुले मेकिङ शैली, सृजनात्मकता, विषयवस्तुमा संसारका सिनेमासँग भिड्न सकुन् ।’
#लकडाउन # नेपाली सिनेमा # दिपेन्द्र के खनाल